चिनियाँ मोडलको अमेरिकी नक्कल के हुन्छ नीति ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय चिनियाँ मोडलको अमेरिकी नक्कल के हुन्छ नीति ?
चिनियाँ मोडलको अमेरिकी नक्कल के हुन्छ नीति ?
♦भेरोनिक डी रुगी
माओपछि चीनमा भएको आर्थिक विस्फोट उसले पुँजीवाद अँगालुन्जेल मात्र हो । सन् २०१५ मा पुँजीवाद विरोधी औद्योगिक नीति अन्तर्गत ‘मेड इन चाइना, २०२५’ योजना सुरु भएदेखि यो मुलुक पुँजीवादबाट एककदम पछि हटेको छ । यद्यपि हालसालै ‘मेड इन चाइना, २०२५’नाम हटाइएको छ, तथापि नीति कायमै छ ।
यसले काम गर्दैन । चीनको नयाँ औद्योगिक नीतिले एउटा काम भने गरेको छ । यसले धेरै कन्जर्भेटिभ अमेरिकीहरूलाई तर्साएको छ । उनीहरूलाई लाग्न थालेको छ—आर्थिक वृद्धिको मुख्यचालक बजार होइन, कर्मचारीतन्त्र हो । अर्थात, सबै प्राकृतिक र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार निक्षेपण गरिएको कर्मचारीतन्त्रका प्रशासकहरू अर्थतन्त्रका चालक हुन् भन्ने पारेको छ । यसको एउटा उदाहरण साना व्यवसाय तथा उद्यमसम्बन्धी अमेरिकी सिनेट कमिटीको एउटा प्रतिवेदनमा पाइन्छ । यसमा बेइजिङको योजनालाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने कुरा छ ।
विश्व आधिपत्य हासिल गर्न चीनले थालेको माथिदेखि तल झर्ने तथा भन्सार, अनुदान, पुँजी नियन्त्रणजस्ता गैरबजार विधिका नीतिहरूले साँच्चिकै काम गर्छन् भन्ने आम त्रास, कमिटीको प्रतिवेदनमा प्रतिविम्बित छ । चिनियाँ नीतिहरूले विद्युतीय सवारी, रोबोट र अन्तरिक्षसम्बद्ध उद्योगसहित १० क्षेत्रमा सबैलाई उछिन्छन् भन्ने आम त्रास हो ।
चीनको आर्थिक वृद्धि र भीमकाय आकारलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । तर यसको अर्थ चीनलाई आर्थिक प्रभुत्व कायम गर्न तानाशाही विधिले सक्षम बनाउँछ भन्ने होइन । धेरै अमेरिकी प्राज्ञ, अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञहरूले उतिबेला बढाे भयानक ढंगले सोभियत संघ हाम्रो विरोधी आर्थिक शक्ति हुनेछ भन्ने गलत प्रक्षेपण गरेका थिए । यसबाट मैले सोचेकी थिएँ, हामीले एउटा पाठ सिकेका थियौं ।
राज्यको योजनाले चीनको आर्थिक समृद्धिलाई अँध्यारोमा पार्नेछ । यसका स्रोत सीमित छन् । सरकारले कुनै एक, दुई वा दशवटा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्यो भने अरू सबै क्षेत्रबाट स्रोतहरू आफूतिर खिच्छ । यसले भविष्यको आर्थिक वृद्धिलाई जोखिममा पार्छ ।
खुलाबजार पक्षधरले यो कुरालाई बुझेका छन् । स्थानीय ज्ञानको महत्वलाई नबुझेका, अविद्याको सिकार र सरकारी अधिकारीहरूले विजेता चुन्ने काम बजारले भन्दा राम्ररी गर्नै सक्दैनन् । व्यवहारमा कर्मचारीतन्त्रले पराजितहरूलाई माथि ल्याउँछ, विजेताहरूको उच्चतम सम्भाव्य क्षमता उपयोगमा बाधा खडा गर्छ । नवसिर्जनाको विरुद्ध हुन्छ केन्द्रीय योजना । यो चीनमा पहिल्यै देखिसकिएको हो ।
यसमा सिनेटर रुबियोको अडानलाई भने नम्बर दिनैपर्छ । चीनमा माथिदेखि तल सर्ने सरकारी योजनाले काम गर्छ भने अमेरिकामा पनि काम गर्छ भन्ने उनको विश्वास छ । तर उनले बिर्सिएका छन्, जुन कुरो अमेरिकामा सरकारले गर्दा असफल भएका छन्, त्यो चीनमा गर्दा पनि असफलै हुन्छन् नि ! होइन, यसपाली कुरो बेग्लै छ भन्ने हो तथा चीन नवसिर्जना र उत्पादनमा विश्व–अधिपति हुन्छ भनी मान्ने हो भने पनि अमेरिकाले सरकारी हस्तक्षेपको नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्नु हुँदैन ।
पहिलो त, तुलनात्मक लाभको नियम सत्य हो । चीनले बाहिर सस्तोमा उत्पादन हुने वस्तु आयात गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै फाइदा हुन्छ । दोस्रो, अमेरिकाले अरू मुलुकका औद्योगिक नीतिहरूबाट तर्सिएर पहिले पनि आफ्नो औद्योगिक नीति बनाएकै हो । तर त्यसको नतिजा भनेको उपभोक्ता र करदाताले बेहोर्नुपरेको भारी लागत हो । यसले गम्भीर आर्थिक विसंगतिहरूलाई भित्य्रायो ।
अमेरिकी इतिहासमा गर्व गर्ने कन्जर्भेटिभहरूले १९८० मा ल्याइएको अमेरिकी औद्योगिक नीतिको असफलताबाट सिक्नुपर्छ । त्यति बेला जापानले केही घरायसी प्रयोगका विद्युतीय उपकरण उत्पादनमा सबैलाई उछिन्दै छ भन्ने त्रासलाई सम्बोधन गर्न उक्त नीति आएको थियो । ती उपायले न जापानमा काम गरे, न अमेरिकामा । राजनीतिक सम्पर्क राम्रो भएका र सञ्चालनमा आईसकेका उद्योगलाई मात्रै संरक्षण गर्ने भएकाले औद्योगिक नीतिहरू असफल हुन्छन् भन्ने पाठ विगतले हामीलाई सिकाएको छ । अझ राम्रा उपायहरू लिएर आउने उच्च सिर्जनशील सम्भावित उद्यमी र नवउद्यमी यसबाट पीडित हुन्छन् ।
रुबियोको प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो हामीले उत्पादनमूलक (उदाहरणका लागि) उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नै हुँदैन । उत्पादित वस्तुको निर्यात धनी मुलुकहरूको आयको प्रमुख स्रोत हो । तर व्यापारको लाभलाई कति परिमाणमा वस्तु निर्यात गरियो भनेर नाप्नु हुँदैन । एडम स्मिथलगायतका अर्थशास्त्रीहरूले भनेजस्तो व्यापारको मुख्य उद्देश्य कतिवस्तु आयात गर्न सकिने भइयो भन्ने हुनुपर्छ ।
यसको अर्थ सरकारको कुनै भूमिका छैन भन्ने होइन । वास्तवमा क्लिन्टन कार्यकालमा सबैभन्दा प्रभावकारी औद्योगिक नीति आएको थियो । त्यसमा नवप्रवर्तनका लागि ठाउँ दिने र त्यसको सुरक्षा गर्ने भन्ने थियो । यसबाट राजनीतिकर्मीहरूले सिकेको हुनुपर्छ । १९९७ मा क्लिन्टन प्रशासनको ‘फ्रेमवर्क फर ग्लोबल इलेक्ट्रोनिक कमर्स’ले त्यही काम गरेको थियो । डिजिटल व्यापारका लागि‘अनुमतिबिना सिर्जना’भन्ने कथनले अमेरिकी नेतृत्वमा इन्टरेनटको व्यापारिक विकासलाई बल पुर्याएको थियो । अमेरिकी खुला उद्यम प्रणालीलाई घात हुने गरी हामीले भयदोहनलाई ठाउँ दिनु हुँदैन । यही प्रणालीले नै उपभोक्ताले खोजेको कुरा उपलब्ध गराउन सक्षम छ भन्ने पुष्टि भएको छ । (द न्युयोर्क टाइम्समा Why Are Republicans Embracing Economic Qmate Planning? शीर्षकबाट नेपालबहसको स्वतन्त्र अनुवाद) रुगी जर्ज मेसोन युनिभर्सिटीको मर्काटस सेन्टरमा सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।
Previous articleरासायनिक मलको चरम अभावको देशभरीका किसानहरु
Next articleएमसीसीका कारण हल्लिदै सत्ता गठबन्धन , बाबुराम पनि मैदानमा